Taliyaha Qeybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga oo Xildhibaan loogu doortay Baydhabo – XAMAR POST
Doorashada kuraas ka mid ah kuwa Golaha Shacabka oo Baarlamaanka 11-aad ah ayaa maanta ka socoto, waxaana lagu tartamayaa kuraasta lix ah oo kale ah; HOP#077, HOP#099, HOP#167, HOP#168, HOP#186 & HOP#261, Inkastoo la doortay kuraastaas seddex ka mid ah.
Kursiga Koowaad ee HOP#099,oo ay hore ugu fadhisay Deeqa Xuseen Xasan, waxaa ku guuleystay Axmed Madoobe Nuunow, oo ah wiil uu dhalay Xildhibaan hore Madoobe Nuunow, isagoo helay 75 cod, halka musharax la tartamay uu helay 25-cod.
Sidoo kale, kursiga labaad ee doorashadiisa lagu qabtay Magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah kursiga HOP#168, waxaa ku guuleystay doorashadiisa Luul Ibraahim Cumar oo heshay 86-cod, iyadoo Kursigaan uu hore ugu fadhiyay Xildhibaan Xasan Macalin Xuseen, balse kursigaan Dumarka ayaa loo wareejiyay.
Kursiga Seddexaad ayaa ah HOP#167, waxaa ku guuleystay Cabdisalaan Cali Cabdi, isagoo helay 74-cod, balse waxaa Baarlamaankii 10-aad ku fadhiyay Xildhibaan Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen.
Maxamed Sheekh Cabdulaahi Ciirow ayaa ku guuleystay kursiga afaraad ee Hop#077, isagoo heley codad gaaraya 83-cod, halka musharaxii la tartamayay Cabdinaasir Cali Xasan uu heley 13-cod, inkastoo Kursiga Hop#077 uu hore ugu fadhiyay xildhibaan Isgoowe Deeqow Isaaq.
Sidoo kale, Maxamed Sheekh Abdullaahi Ciirow oo maanta Xildhibaan loogu doortay Magaalada Baydhabo, waxaa uu ka mid noqonayaa Xubnaha Saraakiisha ah ee kusoo baxay doorashada Golaha Shacabka ah, maadama uu ahaa Taliyaha Ciidanka Qeybta 60aad Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ka howlgasha deegaannada Maamulka Koofur galbeed.